dayniile » War deg deg ah dowlada Somaliya oo kashaneysa Safaaradda Soomaalida ee Addis oo ku guuleysatay siideynta Wariye Maxamed Aweys Muudey Boqorka bartamaha
War deg deg ah dowlada Somaliya oo kashaneysa Safaaradda Soomaalida ee Addis oo ku guuleysatay siideynta Wariye Maxamed Aweys Muudey Boqorka bartamaha
Dowlada Somaliya oo kashaneysa Safaaradda Soomaalida ee Addis oo ku guuleysatay siideynta Wariye Maxamed Aweys Muudey oo dadaal dheer ka dib oo in mudda ah ku xirnaa Ethopia , hadana sida warar ku sheegayaan Maalmaha Soo socdo Ku soo jeeda Muqdisho.
Xogtaan waxaa laga soo xigtay Agaasime Sayid Axmed
Qunsul Abdullahi Warfa isaguna shaqo waxa una sheegay in uu shir jaraaid ku qaban doono marka uu soo gaaro Garoonka Muqdisho.
Boqorka Bartamaha ayaa Xabsi la dhigay kadib markii Qarax ka Dhacay meel u dhow Xaafadda ay Soomaalida degto ee Bolle, halkaasoo howlgal ay Ciidamada Amaanka ka sameeyeen ku Qabteen Wariye Boqorka Bartamaha iyo Dad kale.
wariyaha oo lagu eedeeyey in uu ku luglahaa falal aragagixiso ayaa maxkamadi ku xakunta 27 sano wuxuuna xirnaa ku dhawaad 10 sano
bartamahaWariyaha ayaa Addis Ababa u joogay inuu kasii Dhoofo, wuxuuna ka mid ahaa Wariyeyaasha Naftooda kala Cararay magaalada Muqdisho. iyadoo ay xusid mudan tahay inuu ka mid ahaa Waariyeyaashii ku Dhaawacmay Qaraxii Hotel Shaamo. Waxaase Nasiib Daro ah in Maanta loo Xiro Shaki looga Qabo Kooxihii uu Naftiisa kala cararay.
Safaaradda Soomaaliya ee Addis Ababa ayaa dhaqdhaqaaq ku aadan dadka Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira iyo Wariyahanba ay xil iska saartay waxayna ku guuleysatay sii deynta Boqorka Bartamaha oo ay si adag ugala hadashay Dowladda Ethiopia
Ehelada Wariyaha ayaa Dowladda Soomaaliya iyo Safiirka Soomaaliya ee Addis Ababa daaliyo dabaglo ku sameysay arintiisa oo mudo dheer ku xirnaa Xabsi ay leedahay Dowldaasi